Driver – (For FMCG Company / Urgent !!!)
– ဘွဲ့ ရ (သို့) အထက်တန်း အဆင့်အောင်မြင်ပြီးသူဖြစ်ရမည်။
– အသက် ( ၂၅ မှ ၃၅ ) အတွင်းရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– လုပ်ငန်းတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး (၂)နှစ်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
– လူမူဆက်ဆံရေးကောင်းမွန်သူ ၊ အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
စိတ်ပါဝင်စား၍ လျှောက်ထားလိုသူများသည်ကိုယ်ရေးရာဇဝင်အကျဉ်း ( Microsoft Word Format CV ) နှင့် (၁)လ အတွင်း ရိုက်ကူးထားသော ကာလာဓာတ်ပုံ(၁)ပုံ ကို
( [email protected]) အီးမေးလ်ဖြင့် လျောက်ထားနိုင်ပါသည်။
စုံစမ်းမေးမြန်းလိုပါက ဖုန်းနံပါတ် (09-797296702 – Achieve Career Myanmar ) ကိုဆက်သွယ်စုံစမ်းမေးမြန်း နိုင်ပါသည်။
Job Categories: Accounting. Job Types: Full-Time. Salary: 100,000 - 300,000. 353 total views, 1 today Apply for this Job / အလုပ်လျှောက်လွှာ